‘सेयरको मूल्य तोक्ने काम सरकारको होइन’: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा - Nepali Online News Media-shikharnews.com
‘सेयरको मूल्य तोक्ने काम सरकारको होइन’: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडाै,२६ वैशाख । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भेँडो मानसिकताले सेयरबजारमा उतारचढाव आउने बताएका छन् । ‘सेयरको मूल्य तोक्ने काम सरकारको होइन’, खतिवडाले भने, ‘जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार लगानी गर्नुहोस्, सरकार पुँजी बजारको विकास र बिस्तारका लागि प्रतिबद्ध छ ।’
‘देशभरि सेयर कारोबार गर्न सकिने वातावरण बनाउने हाम्रो योजना छ’, उनले भने, ‘धेरै नेपाली सेयरका मालिक हुन् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । अब सेयर बजारमा बास्ताविक क्षेत्रका ठूला कम्पनी आउनु पर्छ, त्यसका लागि हामी निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई उत्प्रेरित, सहज र बाध्य पनि पार्नेछौं ।’
१ करोड पुँजी भएका लघुवित्त विकास बैंक पुँजीबजारमा आउने तर अर्बौं नाफा कमाउने निजी क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजार नहुने अवस्था अब नरहने डा. खतिवडाले बताए ।
अर्थमन्त्रीले यस्तो भन्यो, त्यस्तो भने भनेर सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने समूह भएको भन्दै खतिवडाले जोखिम लिन सक्ने क्षमता अनुसार सेयरमा लगानि गर्न आग्रह गरे ।
‘तपाईंले कमाएको सरकारलाई दिनु पनि पर्दैन, तपाईलाई हुने घाटाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्दैन’ उनले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको प्रथम पुँजीबजार प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानीका नयाँ विकल्प उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
बुधबार भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको प्रदर्शनी बिहीबारसम्म चल्ने छ । प्रदर्शनीमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतको सहभागिता रहेको छ ।